Tozọ iji zube okporo ụzọ weebụsaịtị gị | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 8, 2011 Douglas Karr
Anyị nọ n’azụ maka idozi mkpanaka anyị na iPad nke isiokwu ọhụrụ na Martech… ọ bụ na ọrụ, ọ bụ ezie! Otu ihe ị ga- mara bụ na, dabere na nhazi nke post, anyị nwere mgbasa ozi dị iche na ibe. Anyị mere nke a site na ịhazi wijetị nke ike anyị na iji ya Nkwado maka itinye onwe gị n'ọrụ nke mgbasa ozi.
Enwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi lekwasịrị ndị na-ege gị ntị anya karịa ngwaọrụ ha na-eji, ọ bụ ezie na ozi nkọwa a sitere na Monetate na-agwa ha okwu. Ogologo usoro nhazi oge, ọnọdụ, oge nleta, sistemụ arụmọrụ, ihu igwe, ngwaahịa ma ọ bụ ibe elere anya na ebe dị anya na etiti mmezu gị (ma ọ bụ ọnọdụ ụlọ ọrụ) nwere ike iji hazie ahụmịhe ma bulie ọnụọgụ nzaghachi.
Site na infographic: Icheta okporo ụzọ weebụsaịtị site na ndị ahịa iji melite ọnụego ntụgharị na-eme naanị site na 25% nke ndị ahịa dijitalụ taa. Site na ntakịrị etu esi achọpụta, ndị na-ere ahịa nwere ike ịmalite ịhazi ahụmịhe weebụsaịtị maka ndị ọbịa ọ bụla. Ebumnuche ga-abara ndị na-azụ ahịa uru site na imepụta ahụmịhe nke ịzụ ahịa n'ịntanetị n'otu n'otu nke na-ebute ntụgharị dị elu.
Ihe wetara gị bụ: Monetate - usoro ịre ahịa dijitalụ ị nwere ike iji nwalee ma duputa ọkwa ngwaahịa, ozi, na atụmatụ ahaziri iche, ebe ọ bụla, na ibe ọ bụla, dabere na ihe niile ị maara banyere onye ọbịa ahụ na-elele ibe ahụ.
Tags: ezubere iche maka omumegeotargetingzụta akụkọ ihe mere emeezubere icheiche ihu igwe
Nov 8, 2011 na 4:45 PM
Daalụ maka ịkekọrịta ozi infographic anyị, Douglas! Nwee ekele maka ya.